Ganacsatada Soomaaliyeed oo sheegay xiliga ay joojinayaan Qaadka Kenya – Somali Top News
Ganacsatada Soomaaliyeed oo sheegay xiliga ay joojinayaan Qaadka Kenya
Kaddib markii maalin ka hor ay ku dhawaaqeen ganacsatada keenta qaadka magaalada muqdisho inay joojiyeen qaadkii ay keeni jireen sababo la xiriira xasradda siyaasadeed ee ka dhex aloolsan soomaaliya iyo Kenya islamarkaana maalintii shalay ahayd uu yimid muqdisho mid ka badan kuwii horay u imaan jiray ayaa arrintaasi waxaan wax ka weydiinay guddoomiyaha guddiga ganacsatada qaadka keenta magaalada Muqdisho Qooje Maxamuud Qayliye.
Mar uu lahadlay Warbaahinta ayuu sheegay in si qaldan uu kaga baxsaday erayga ahaa waan joojinay qaadka maanta kaddib blse ay doonayeen inay yiraahdaan waan joojin doonaa haddii uu xiriirka soomaaliya iyo Kenya sii xumaado.
Mr Qooje ayaa sheegay in qaadka ay keenayan magaalada muqdisho uu sii socon doono muddo laba todobaad ah xiligaasina aysoo uruursanayaan lacagaha kaga maqan gudaha soomaaliya iyo gudaha dalka Kenya.
Intaa waxa uu kudaray hadalkiisa kolka ay soo uruursadaan lacagahooda 14 cisho kaddib ay joojinayaan qaadkii ay keeni jireen hayeeshee arrintaasina ay ku mashquulsantahay dowladda soomaaliya oomawood uleh.
Ganacsatada soomaaliyeed ee qadka keenta magaalada muqdisho ayaa laga dhowrayaa haddii ay joojinayaan qaadkii ay keenin jireen muddo laba todobaad ah kaddib iyada oo la xasuusanyahay hadalkii kasoo yeeray maalin ka hor ee ahaa inay joojiyeen qaadkii kaga imaan jiray Kenya gabi ahaantiisaba blse arrintaasi ay noqotay hal baac lagu lis mar haddii uu yimid shalay mid ka badan kuwii hore u imaan jiray.
← Faah-faahin: Al shabaab iyo Ciidamada dowladda oo ku dagaalamay dagmada Balcad
Ciidan Soomaali iyo American isugu jira oo weerar cir iyo dhul ah ku qaaday Al shabaab →
Wararkii ugu dambeeyay Al shabaab iyo Daacish oo ku dagaalamay Soomaaliya
Ra’isul Wasaaraha Itoobiya oo markale ka saxiixday Soomaaliya Qodobo shaki badan abuuray